DEG DEG:Madaxtooyada Puntland oo go’aan culus ay kasoo saareen wariyaashu & Gadood xoogan oo dhacay kadib markii…. – Puntlandtimes
DEG DEG:Madaxtooyada Puntland oo go’aan culus ay kasoo saareen wariyaashu & Gadood xoogan oo dhacay kadib markii….
February 12, 2019 Puntland PL
GAROWE(P-TIMES)- Warbaahinta madaxa banaan ee ka hawlgasha magaalada Garowe ee caasimada Puntland ayaa dhamaanba hakisay maanta in ay baahiso dhaarinta gollaha wasiirada cusub ee dowladda Puntland, kadib markii loo diiday in ay gudaha u galaan madaxtooyada oo ahayd goobta lagu dhaarinayey wasiirada cusub.
Madaxtooyada Puntland ayaa shaacisay in shakhsiyaad ka tirsan ay warbaahinta qaybaheeda kale u diri doonaan muuqaalada dhaarinta ah ee wasiirada Puntland, taas oo ay ka biya diideen warbaahintu isla markaasna ay go’aansadeen in aysan baahin muuqaalada madaxtooyada.
Wariyaasha ku dhaqan magaalada Garow ayaa goor dhow warbaahinta la hadli doona, waxaana ay go’aan midaysan kasoo saari doonaan xukuumadda cusub ee madaxweyne Denni.
Faah faahinta goor dhow naga filo
Weriyayaasha webpage-kan ka mid yahay waa tuugadii Gaas la shaqaysan jirtay, maxay uga hadli waayeen mushahar la’aantii, boobkii hantida dadweynaha, dayacii amniga Puntland oo hada qaylada u bilaabeen, waa in la jirdilaa oo xarig loogu daraa.